Sidaan ognahay dumarka waxaa uu alle ugu deeqay xubno aysan laheyn raga sidoo kale - Hablaha Media Network
Sidaan ognahay dumarka waxaa uu alle ugu deeqay xubno aysan laheyn raga sidoo kale
HMN:- Sidaan ognahay dumarka waxaa uu alle ugu deeqay xubno aysan laheyn raga sidoo kale raga waxaa uu alle ugu deeqay raga wax aysan laheyn dumarka sidaas darteed waxaa la shegaa quruxda dumarka waxaa ay ku jirtaa naasaha waayo gabadhii aan laheyn naaso taas wax qurux ah malahan sida lawada ogsoonyahay.
Dumarka naasahooda ma isku midbaa mase waa kala duwanyhiin marka la eego xaga cabirka iyo waliba quruxda sida ay aniga ila tahay isku mid mahan oo waa kala qurxoonyihiin sida qof walba ogyahay.
Marka la eego horaadaha dumarka ama naasaha waxaa ay u kala baxaan ilaa dhowr nuuc oo kala duwan.
1: waxaa jira kuwa waa weyn oo markii aad aragto aysan isha ku qanceyn.
2: waxaa jira kuwa dheer dheer oo ka sii daran kuwii hore.
3: waxaa jira kuwa gaab gaab waa kuwa iska caadi ah
RIIX HALKAN DAAWO MUUQAALKA FARTUUN:
4: Kan ugu qurxoon sida ay aniga ila tahay waa kan xogaan weyn hada afka dheer oo markii aad aragto isha ay la dhecee.